लाल गोभी को पीएच पेपर टेस्ट स्ट्रिप्स कसरि बनाइयो
तपाईंको आफ्नै पीएच पेपर परीक्षण स्ट्रिप्स बनाउन सजिलो, सुरक्षित, र रमाईलो छ। यो एक परियोजना हो जुन बच्चाहरूले गर्न सक्छन् र त्यो घरबाट गर्न सकिन्छ, यद्यपि क्यालिब्रेटेड टेस्ट स्ट्रिपहरू ल्याबमा काम गर्दछन्।
समय आवश्यक छ: 15 मिनेट र सुखाने समय
यहाँ कसरी छ
लाल गोभी (या बैंगनी) को टुक्राहरु मा कटौती गर्नुहोस कि यो एक ब्लेंडर मा फिट हुनेछ। गोभी चोर्ने, यसको मिश्रण गर्न आवश्यक न्यूनतम मात्रामा पानी थप्दछ (किनकि तपाइँ जुन जुनसुकै ठाउँमा सम्भव छ जसलाई जुनसुकै रस बनाउन चाहनुहुन्छ)। यदि तपाईंसँग ब्लेंडर छैन भने, एक सब्जी को लागी प्रयोग गर्नुहोस् वा चाँदीको प्रयोग गरेर आफ्नो गोभीको छेउमा राख्नुहोस्।
गोभी माइक्रोवेव यो उबल प्वाइन्टमा नभएसम्म। तपाईं तरल फोडा देख्नुहुनेछ वा गोभीबाट अरू भाप भइरहेको छ। यदि तपाईंसँग माइक्रोवेव छैन भने गोभीले उबलते पानीको सानो मात्रामा साबुन गर्नुहोस् वा अन्य गोभीले अर्को विधि प्रयोग गरेर गर्मीमा लिन्छ।
गोभीलाई ठोक्नुहोस् (लगभग 10 मिनेट)।
गोभीबाट फिल्टर पेपर वा कफी फिल्टर मार्फत तरल फिल्टर गर्नुहोस्। यो गहिरो रंग हुनुपर्छ।
यो तरलमा फिल्टर पेपर वा कफी फिल्टर सोच्नुहोस्। सुत्न अनुमति दिनुहोस्। टाढाको रङको पेटीमा टेस्ट स्ट्रिप्समा काट्नुहोस्।
ड्रिपर वा टूथपिक प्रयोग गर्नुहोस् एक टेबल तरल परीक्षण परीक्षण पट्टीमा। एसिडहरू र कुर्सियोंको लागि रङ दायरा विशेष संयंत्रमा निर्भर हुनेछ। यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ, तपाईं ज्ञात पीएचको साथ तरल पदार्थ प्रयोग गरेर पीएच र रङको चार्ट निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाइँ अज्ञात परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। एसिडका उदाहरणहरू हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल), सिरका, र लेमनको रस समावेश गर्दछ। आधारहरु को उदाहरण सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (NaOH या KOH) र बेकिंग सोडा समाधान शामिल हो।
तपाईंको पीएच पेपर प्रयोग गर्न अर्को तरिका रंग परिवर्तन पत्रको रूपमा हो। तपाईं एक टूथपिक वा कपास स्वाबा प्रयोग गरेर पीएच पेपरमा एक एसिड वा आधारमा डिप गरिएको छ।
यदि तपाईं रंगीन औंलाहरू चाहानुहुन्छ भने, गोभीको रसको साथमा मात्र आधा घण्टाको कागज लिनुहोस्, अर्को साइड छोडेर छोड्नुहोस्। तपाईले कम प्रयोगयोग्य पेपर पाउनुहुनेछ, तर तपाईसँग लिनु पर्ने ठाउँ हुनेछ।
धेरै बिरुवाहरु को रंगहरु को उत्पादन गर्दछ जो पीएच संकेतक को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस परियोजनालाई अन्य साधारण घर र बगैचा संकेतकहरूको साथ प्रयास गर्नुहोस्।
फिल्टर पेपर वा कफी फिल्टर
ब्लेंडर - वैकल्पिक
माइक्रोवेव - वैकल्पिक
ड्रपर वा टूथपेक्स - वैकल्पिक
सोडामा अण्डा: एक दन्त स्वास्थ्य गतिविधि
हरित आगो हेलोवीन जैक-ओ-लालटेन
कसरी शास्त्रीय केमिकल ज्वालामुखी - Vesuvius फायर
कसरी Benzoic एसिड हिम ग्लोब बनाउन
साल्टपिएटर वा पोटेशियम नाइट्रेट किन्नुहोस्
नौौं घर (बृहस्पति)
SQL डेटाबेस कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुहोस्
मेक्सिकोको 8 सबैभन्दा सफल फिलिमकारहरू
पहिलो कम्प्युटर गरिएको स्प्रेडशिट
PHP सँग प्रसोधन फारम डेटा प्रसोधन गर्दै
बेग्लै समय प्रार्थनाहरू पगन बच्चाहरूको लागि
तीर: ग्रीस युद्ध र हिंसा को भगवान
इन्फ्रारेड आरसी कसरी काम गर्दछ?
रङ एक्सेन्ट र कम्बोबिन - होम लोन निर्णयहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका मा संस्थागत नैतिकता को5उदाहरणहरु
Hippopotamus को बहुमूल्य के हो?
प्राचीन उपकरण Oud
हर्मो होलोरिथ र कम्प्यूटर पंच कार्डहरू
आधारभूत युक्तिहरू तपाईंको जीवविज्ञान कक्षा ऐस गर्न
Baleen र टोटोhed व्हील्स बीच मतभेद
बारबरा रडिंग मोर्गन जीवनी
स्वीडेन को रानी क्रिस्टीना को जीवनी
2015 साँचो घोस्ट र असाधारण कथाहरु
उत्तरी अमेरिकामा एक सामान्य ट्री लाउरेल ओक
लरेंस एम। लाम्बी
अमेरिकी विरासत विद्यार्थी शब्दकोश
एन्जिल्स र तपाईंको स्वास्थ्य
ESL व्याकरण पाठ योजना: कसरी "जस्तै" प्रयोग गर्ने